Encounter with those who want auspicious start – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Encounter with those who want auspicious start
မင်္ဂလာကို လိုချင်ကြသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အိမ်ထောင်သက် ၁၆ နှစ်နဲ့ ခုနစ်ရက် တင်းတင်းပြည့်တဲ့ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက်မှာ ကျွန်တော်တို့ လင်မယား ကွာရှင်းပြတ်စဲလိုက်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ စာဖတ်ပရိသတ်ကို နတ်သံနှောပြီး ပြောပြဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်။ ခေါင်းစဉ်တောင် ရွေးပြီးနေပါပြီ။ ကျွန်တော့် မူရင်းခေါင်းစဉ်က “ချစ်သူသတ်လို့ သေတဲ့ မသာ”လို့ ဖြစ်ပေမယ့် စကားလုံးကြမ်းလွန်းတာကြောင့် နည်းနည်းလျှော့လိုက်ပြီး “ချစ်သူသတ်လို့ သေတဲ့သူ”လို့ အကြမ်းဖျဉ်း ရွေးထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်နည်းတူ ချစ်သူသတ်လို့ သေခဲ့ရဖူးသူ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်က ဇာတ်ညွှန်းအနေနဲ့ ရေးပေးစမ်းပါဗျာလို့ ပြောတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ လက်တွေ့မှာ ဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ ရေးဖြစ်မယ်မသိဘူး။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဘယ်ပုံနဲ့ ရေးရေး၊ အဲဒီ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ ကြိုပြီး ကြော်ငြာထိုးထားလိုက်ပါရစေနော်။
ထားပါတော့။ လောလောဆယ် ကျွန်တော် ရေးပြချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့နေ့က ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ အဲဒါလေးက ငိုအားထက် ရယ်အားသန်လို့ပဲ ဆိုရမလား၊ ထူးပေဆန်းပေသည်လို့ပဲ ညည်းရမလားတော့ မသိပါဘူး။
လောကတံထွာ လူ့ဓမ္မတာအရ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကြရင် အိမ်ရာ ထူထောင်ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ခြွင်းချက်တွေရှိပေမယ့်လည်း အများစုကတော့ အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်။ အကျဉ်းခြုံ့ရင် ခြုံ့ချင်သလောက် ခြုံ့လိုက်လို့ရသလို အကျယ်ချဲ့ချင်သပဆိုလည်း မိုးမဆုံး မြေမဆုံး ချဲ့လို့ ရပါတယ်။ ဒါတွေက မဆန်းပါဘူး
သို့သော် ကျွန်တော်တို့လို ကွာရှင်းပြတ်စဲကြရတဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့ နည်းပါတယ်။ နည်းရတဲ့အထဲ ကျွန်တော်က ပိုထူးခြားပါတယ်။ ထူးဆို အိမ်ထောင်ရေး စာတစ်အုပ်ကို ရေးထုတ်ထားတဲ့အပြင် လူတကာရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာကို နားစိုက်ပေးတဲ့ အလုပ်ကိုပါ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်တာမို့ပါ။ ဆရာ သာဓုကတော့ ပြောဖူးတယ်။ ဘယ်ဆံသဆရာမှ ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ပြန်ညှပ်လို့ မရဘူးလို့ အနက်ထွက်တဲ့ စကားမျိုးပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်လည်း ဆံသသမားပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်နဲ့ ပုံခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဗိုက်၊ ကိုယ့်ရင် ကိုယ်ပြန်ခွဲနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်ရယ်လို့ မရှိသလိုပေါ့။ ကပ်ဖဲ့ပြောချင်သူများအတွက် သည်နေရာမှာ မလိုဘဲ အပိုစကား ထပ်ထည့်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သူများတကာကို ခွဲသလို မေ့ဆေးတွေ ဘာတွေ ပေးပြီး တကယ့် နှလုံးတို့၊ အူတို့၊ ကျောက်ကပ်တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲတာမျိုးကို ပြောတာနော်။ ခြေသလုံးက သွေးစုနာလောက်တော့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ခွဲချင်ခွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်လည်း သွေးစုနာလောက်တော့ ဘာသာခွဲခဲ့တာချည်းပါပဲ။ အခုဟာကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မခွဲနိုင်တဲ့ အနာမျိုးမို့ ဖြစ်ကုန်တာလို့ပဲ တိုတို ဆိုပါစို့ရဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲကြတဲ့နေ့က တနင်္လာနေ့ပါ။ အမှန်က စနေနေ့ကတည်းက ကွာချင်တာ။ တရားဝင်အောင်လို့ တရားရုံးတော်နဲ့ အသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်မှာ ကွာချင်တာမို့ တနင်္လာနေ့ ရောက်အောင် စောင့်နေရတယ်။
ကျွန်တော်က အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ပြီးရင် ဆိုင်းမထားချင်ဘူး။ ကိစ္စ မြန်မြန်ဖြတ်ချင်တဲ့ စိတ်မျိုးက ကျွန်တော့်မှာ ရှိတယ်။
အဲဒီ့နေ့ မတိုင်ခင်ကတည်းက လိုအပ်တဲ့ စာချုပ်စာတမ်းကို ဝယ်ယူ ပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ ဆိုတော့ အဲဒီ့တနင်္လာမနက်မှာ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
တရားရုံးကို ရွေးချယ်ရာမှာ ကားရပ်နားစရာနေရာလည်းခက်ခဲ၊ လူသူ လည်း ထူထပ်တဲ့ မြို့လယ်က တရားရုံးကို မရွေးတော့ဘဲ ကားရပ်စရာနေရာလည်း ပေါ၊ လူသူလည်း သိပ်မထူထပ်လှတဲ့ ခရိုင်ရုံးလေး တစ်ရုံးကို ရွေးလိုက် ပါတယ်။ ဒါလည်း ကြိုတင်စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပါ။
မနက် ဆယ်နာရီထိုးကို အဲဒီ့ရုံး အရောက်လာဖို့လည်း ကျွန်တော့်ချစ်သူကို မှာကြားချိန်းဆိုပြီးပါပြီ။ တကယ်လည်း ဆယ်နာရီ မထိုးခင် ဆယ်မိနစ်လောက်မှာ အဲဒီ့ရုံးကို ရောက်သွားပါတယ်။ နောက် ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူလည်း ရောက်လာပါတယ်။
ကျွန်တော်က တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ လိုင်စင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်လင့်ကစား သည်လောကနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀လောက်ရှိခဲ့ပြီမို့ ရုံးပရဝုဏ်အတွင်းက လက်နှိပ်စက်ဆရာတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိစ္စမှာ လိုသလို စီစဉ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ အဲဒီ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း လိုလိုချင်ချင်ပဲ ကူညီပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်နိုင်ငံသားလက်မှတ်ထဲ က အလုပ်အကိုင်နေရာမှာ “စာရေး ဆရာ”လို့ ရေးထားတာကိုတွေ့တော့ သူက ကျွန်တော့် ကလောင်နာမည်ကို မေးရှာတယ်။ အရေးထဲမှာ။ ကျွန်တော်လည်း လွယ်လွယ်ကူကူ “မြတ်ခိုင်”လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ သူက အံ့ဩတကြီးနဲ့၊ ဟင်… ဆရာမြတ်ခိုင်က ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပိုချောတယ်နော်တဲ့ဗျ။ အလကား လျှောက်ပြောတာပါ။ အဟုတ်မှတ်မနေကြနဲ့ဦးနော်။ ကျွန်တော် တကယ်ဖြေလိုက်တာက ဟာ၊ အရေးထဲမှာဗျာ၊ အဲဒါကို သိချင်မနေပါနဲ့တော့ ဟူလို။
သို့ကလို သူက တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လိုလိုချင်ချင် ကူညီရှာပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အဖြစ်က အဆင်မပြေဘူး။
ဇာတ်ပေါင်းရင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့က ဆယ်နာရီ မထိုးခင်ကတည်းက ကြိုရောက်တဲ့အပြင် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများလည်း အဆင်သင့် ပါသွားပါလျက်ကနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း စာချုပ်ကို မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခွဲ ကျော်ကာမှ အောင်မြင်စွာ ချုပ်ဆိုနိုင်သွားပါတော့တယ်။
နောက်တစ်ချက်က မူလ ရည်ရွယ်သလို မြို့နယ်အဆင့် တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့ဘဲ မြို့နယ်ထက် တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ ခရိုင်တရားသူကြီးရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ဆိုတာ အဲဒီ့အဖြစ်ကြောင့် ပြောတာပါ။
ဖြစ်ပုံက သည်လိုပါ ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့က အဲဒီ့ရုံးနဲ့ စိမ်းလေတော့ကာ စောစောက ပြောတဲ့ အဲဒီ့ရုံး ပရဝုဏ်ထဲက လက်နှိပ်စက်ဆရာက တစ်ဆင့် ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးရဲ့ ရှေ့ဖတ်စာရေးကြီးဆီကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမှုသွားတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
သည်အခါမှာ ရှေ့ဖတ်စာရေးက ဘာပြောလွှတ်သလဲဆိုတော့ “ဟာ၊ မနက် စောစောစီးစီး မင်္ဂလာ မရှိတဲ့ ကိစ္စကြီးနဲ့ စလိုက်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ”လို့ ပြောသတဲ့ခင်ဗျ။ ပြီးတော့ နေ့ကလည်း တနင်္လာနေ့ ဖြစ်နေလေတော့ကာ ရက်သတ္တ တစ်ပတ်စာ ရုံးဖွင့်ရက်များရဲ့ အစအဦး နေ့လည်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သည်လို မင်္ဂလာ မရှိတဲ့ အမှုနဲ့သာ ဖွင့်မယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် လပ်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ အယူရှိတော်မူတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှုတစ်ခုခုကို အရင်စစ်ဦးမယ်။ အဲဒါပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်၊ စောင့်ပါဦးလို့လည်း ပြောပါသဗျ။
ကျွန်တော် မျက်ဖြူလန်မတတ် ဖြစ်သွားတယ်။ ဘုရား၊ ဘုရား၊ မစည်ကားအပ်တဲ့အရပ်လို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့အထဲမှာ တရားရုံးတော်ဆိုတာလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ပါ။ လင်မယားကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စက မင်္ဂလာမရှိသေးလို့ ရှေ့က အမှုတစ်ခုခု အရင်စစ်ပါရစေဦးဆိုတော့ အဲဒီ့အမှုကကျတော့ မင်္ဂလာရှိသတဲ့လား။ ကျွန်တော် တော်တော့်ကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဘယ့်နှယ့်ကွယ်၊ သူ့လိုသာဆို လပ်ကောင်းဖို့အတွက် တနင်္လာနေ့တိုင်း ထိမ်းမြားလက်ထပ်တဲ့ စုံတွဲ တစ်တွဲကို အပတ်စဉ် ရှာကြံ ဖြည့်တင်းထားရမလို ဖြစ်နေပြီ။
အခု အဲသလိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကိစ္စကို အသာထားပြီး အမှုတစ်မှုမှုကို အရင်စစ်မယ်ဆိုပဲ။ အမှုဆိုကတည်းက တရားလိုရယ်၊ တရား ပြိုင်/တရားခံရယ် ပါလာပြီ။ ဘက်နှစ်ဖက် ငြင်းကြခုန်ကြ၊ လျှောက်လဲကြပြီ။ ဒါတွေဟာ မင်္ဂလာတဲ့လားကွယ်။
အောင်မယ်မင်း… လောက၌ ကျွန်တော်ဉာဏ်မမီနိုင်သော ခြင်းရာများကား များလင့်တည်းဟု ညည်းတွားရမလိုတောင် ဖြစ်သွားသဗျ။
အေးလေ၊ စောင့်ဆိုတော့လည်း စောင့်ရုံပေါ့လို့ အောက်မေ့ပြီး ရုံးပရဝုဏ်ထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကူညီတဲ့ လက်နှိပ်စက်ဆရာက ဘေးမှာ လာထိုင်ရင်း သူ့ရုံး အကြောင်းကို ပြောပြနေသေးတယ်။ အဲဒီ့ရုံးက မြို့နယ် တရားသူကြီးတွေထဲက တစ်ယောက်ကဆို လင်မယား ကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စကို လုံးလုံး လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မပေးဘူးတဲ့ဗျား။
တကယ့် အံ့ဘွယ်သုတပါပဲ။ ဒါမျိုးတွေ ရှိမှန်း အဲတော့မှ ကျွန်တော့် ခမျာလေးမှာ မှတ်သားရပါတော့တယ်။ ဘယ့်နှယ့်ကွယ်၊ ဘယ်အမှုဆိုရင်ဖြင့် လက်မခံဘူး၊ ဘယ်အမှုမျိုးမှ လက်ခံမယ်လို့ တရားသူကြီးတွေမှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေလေမှန်း အဲတော့မှ ကျွန်တော့်ခမျာလေးမှာ သဘောပေါက်သွားတယ်။
ကံက ဆိုးချင်တော့ အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော်တို့ ကွာရှင်းရေးကိစ္စအတွက် ၁၁ နာရီခွဲတဲ့အထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမယ့် တရားသူကြီးကို ရှာလို့ကို မတွေ့နိုင်သေးဘူး။ ဒါနဲ့ လက်နှိပ်စက်ဆရာက ခရိုင်ရုံးဘက်ကို ခြေဦးလှည့်ပေးရှာတယ်။ ခက်တာက ခရိုင်တရားသူကြီးကလည်း သင်တန်းတစ်ခု သွားတက်နေရသေးတာမို့ ရုံးကို ရောက်မလာသေးဘူး။ လာခါတော့ နီးပြီလို့ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း စောင့်ပေါ့။
အရေးထဲ မိကျောင်းသား လက်နှိပ်စက်ဆရာက “ဆရာတို့ နှစ်ယောက် က ကွဲဖို့ ကံမပါလို့နဲ့တူတယ်ဗျ။ မကြုံစဖူး ထူးထူးကဲကဲကို အဆင်မပြေတာတွေ ဆက်တိုက်ကြုံနေရတာ”လို့ ဆိုနေသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကို မချိပြုံးလေးပဲ ပြုံးပြရတော့တယ်။
၁၂ နာရီ စွန်းစွန်းမှာမှ ခရိုင်တရားသူကြီး ရောက်လာတယ်။ သူ မရောက်လာခင်မှာ မြို့နယ်ဘက်က အဆင်ပြေပလားလို့ လက်နှိပ်စက်ဆရာခမျာ ပြေးပြေး ကြည့်ပေးရှာသေးတယ်။ သို့သော်လည်း မြို့နယ်ရုံးအဖြေက တစသမတ်တည်းပဲ၊ မင်္ဂလာမရှိတဲ့ကိစ္စမို့ စောင့်ဦး။ ဒါပဲ။
ခရိုင်တရားသူကြီးကတော့ သိပ်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ရောက်လာလို့ ကျွန်တော့် လက်နှိပ်စက်ဆရာက သွားပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ စုံတွဲကို ချက်ချင်းခေါ်၊ မေးစရာ ရှိတာ မေးပြီးတဲ့နောက် သူ့ရှေ့မှောက်မှာ လက်မှတ် ထိုးခိုင်းပြီး လိုအပ်တာများကို ချောချောမောမောဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်မှာလည်း သက်ပြင်းကို အဲတော့မှ ဟင်းခနဲ ချနိုင်တော့တယ်။
အဲ… ပြောချင်တာက အကြင်သူသည် တရားရုံးတော်သို့ သွားရောက်ပြီးသကာလ လင်မယား ကွာရှင်းပြတ်စဲ လိုသည်ဆိုငြားအံ့။ ထိုသူသည် တနင်္လာနေ့ကိုလည်းကောင်း၊ မနက် ရုံးဖွင့်ဖွင့်ချင်းကာလကိုလည်းကောင်း ဝေရာမဏိ ဝေးစွာ ရှောင်ကြဉ်အပ်ပေ၏ ဆိုတဲ့ နီတိတစ်ခုကို ရပ်သိရွာသိ ထုတ်ထားသင့်၊ မသင့် ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တာပါပဲ။
ပြောမယ့်သာ ပြောရတယ်။ သည်စာမူကိုလည်း “ကောင်းသတင်း”ဂျာနယ်ကို ပို့မှာ။ သူတို့ကလည်း မင်္ဂလာမရှိတဲ့ကိစ္စကို ရေးရမလားဆိုပြီး ပယ်လိုက်မှဖြင့် အခက်။ ဟက်… ဟက်… ဟက်
(၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လထဲမှာ ထုတ်ဝေထားတဲ့ ကောင်းသတင်း ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on 23 April 2010 23 April 2010 Categories Recounts, Reproduction
6 thoughts on “Encounter with those who want auspicious start”
26 April 2010 at 7:22 pm
Sir.. I’m your fan since you wrote articles in mags. OMG! I couldn’t believe that you divorced 6-yrs ago. To my big surprise indeed! Would you mind telling me whether it’s true & how did it happen? Anw, pls take care.
26 April 2010 at 9:37 pm
Yes, Mr. O, we did haveadivorce some six years ago under “unavoidable circumstances.” Our lives were hectic at the time. I wish I could recount the whole thing.
The good news is that we have been reunitedacouple of months after and now we’re havingahappy family. Some may take it as “True love never runs smooth.” 😀
27 April 2010 at 7:53 am
Oic.. 😀 Thanks goodness! Cheers Sir!
28 April 2010 at 4:59 pm
ဘကြီး နောက်ဆုံးက ဟက်… ဟက်… ဟက် ဆိုတာ ဘာလဲဟင် @_@
28 April 2010 at 5:15 pm
“ဟက်… ဟက်… ဟက်…” = မြည်သံဆွဲအလင်္ကာ၊ မရယ်ချင့်ရယ်ချင်ဖြင့် ရယ်သော အသံကို ဆိုလိုသည်။ (ဂွီ…)
30 April 2010 at 2:19 pm
ကွာရှင်းချင်တော့ကိစ္စကိုဆိုင်းမထားဘဲမြန်မြန်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်.. ပြန်ပေါင်းချင်ပြန်တော့လဲ
Previous Previous post: Dirty Conscious
Next Next post: In Memory of Saya Thagadoe